Dowladda Soomaaliya Oo Walaac Ka Muujisay Xaaladda Dalka Koonfur Afrika – Great Banaadir
MUQDISHO – Dowladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay rabshadaha iyo bililiqada ka socda dalka Koonfur Afrika, tan iyo markii toddobaadkii hore la xiray Madaxweynihii Hore ee Dalkaasi, Jakob Suma (Jacob Zuma).
Qoraal ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ka xun tahay Qul-qulatooyinka ka soconaya Dalkaasi, oo Saamayn ku yeeshay Soomaalida Ganacsiga ku leh Dalkaasi.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in 72kii Saac ee la soo dhaafay Gobolka KuwaSuulu-Nataal (KwaZulu-Natal) lagu dilay Afar Qof oo Soomaali ah, qaar kalena lagu dhaawacay, isla-markaana lagu boobay Hantidooda.
Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday Dowladda Koonfur Afrika inay wax ka qabato Kooxaha Burcadda ah ee bartilmaameedsanaya Muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo Ganacsigooda.
Qalalaasaha Muddada Toddobaadka ahi ee Dalkaasi ka socdo ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 60 Qof.